အွန်လိုင်းစျေးရောင်းပွဲက ရတဲ့ ပိုက်ဆံသိန်း(၅၀)ကို ဖားကန့်မြေပြိုမှုအတွက် လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဖိုးချစ်တို့ အဖွဲ့ – သတင်းထူး – Thadin Htoo
သတင်းထူး - Thadin Htoo - Latest Breaking News & Headlines
အွန်လိုင်းစျေးရောင်းပွဲက ရတဲ့ ပိုက်ဆံသိန်း(၅၀)ကို ဖားကန့်မြေပြိုမှုအတွက် လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဖိုးချစ်တို့ အဖွဲ့
By Min Khant	 Last updated Jul 25, 2020
ဇာတ်မင်းသားချော ဖိုးချစ်ဦးဆောင်တဲ့ “ပိုသူလှူ လိုသူကူ” ပရဟိတအွန်လိုင်းဈေးရောင်းပွဲတော်ကြီးကတော့ ဇာတ်သဘင်လောကသားတွေကိုယ်တိုင် ဟင်းချက်ရောင်းပြီး ပြည်သူတွေကို ရောင်းချတဲ့အစီအစဉ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာလောကသားအချင်းချင်း ရိုင်းပင်းကူညီမှုနဲ့ စေတနာရှင် (၇)ရက်သားသမီး အလှူရှင်တွေကြောင့် ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ အလှူငွေတွေများစွာကို
ရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့က ဇူလိုင်လ (၂၄) ရက်နေ့မှာတော့ “ပိုသူလှူ လိုသူကူ” အဖွဲ့ကြီးက အွန်လိုင်းဈေးရောင်းပွဲတော်မှရရှိခဲ့သမျှငွေ သိန်း(၅၀)တိတိကို ဖားကန့်မြို့ ဝှေခါကျေးရွာတွင် ဖြစ်ပွါးခဲ့သည့် မြေပြိုမှူဘေးဒဏ် ခံစားရသော ကျန်ရစ်မိသားစုများအတွက် လှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ “ယခုအလှူဟာ အွန်လိုင်းဈေးရောင်းပွဲတော် ရက်သတ္တပတ်မှာ သဘင်မိသားစုများကို
ချစ်မြတ်နိုးသော အများပြည်သူများရဲ့ ဝိုင်းဝန်းအားပေးသော စုပေါင်းအလှူပင်ဖြစ်ပါကြောင်း သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ပါရန် အသိပေးအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။” ဆိုပြီး ပိုသူလှူ လိုသူကူအဖွဲ့ကြီးက ပြောထားပါသေးတယ်။ “ပိုသူလှူ လိုသူကူ” အဖွဲ့ကြီးကတော့ သူတို့စတင်ရည်ရွယ်ခဲ့တဲ့ ဖားကန့်မြို့ မပြိုမှူဘေးဒဏ် ခံစားရသော ကျန်ရစ်မိသားစုများအတွက် လှူဒါန်းနိုင်ခဲ့လို့
ဝမ်းသာပီတိဖြစ်နေကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း “ပိုသူလှူ လိုသူကူ” အဖွဲ့ကြီးနဲ့ (၇)ရက်သားသမီးအလှူရှင်တို့ရဲ့ ကုသိုလ်လေးကို ဝမ်းမြောက်စွာသာဓုခေါ်ဆိုပေးကြပါဦးနော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Min Khant 639 posts0comments
မီးတွင်းထဲမှာ ကွယ်လွန်သွားရှာတဲ့ (၁၅)နှစ်အရွယ်မိခင်ရဲ့ သနားဖို့ကောင်းလွန်းတဲ့ ကလေးငယ်လေးကို ခေါ်ယူမွေးစားခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
ပိုက်ဆံလည်း လုံးဝ မကိုင် နဝကမ္မ လှူလည်းလက်မခံ ရဟန်းဝိနည်းနှင့် အညီ နေထိုင်သော နိုင်ငံခြားသားဘုန်းကြီးများ
အန္တရာယ်ရှိမှန်း သိပေမယ့် သားသမီးတွေရဲ့ ဆန္ဒကို မပိတ်ပင်ဘဲ လိုက်လျောပေးကြလို့…
အိန္ဒိယတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ ခုနစ်သန်းကျော် ရှိလာ…
စစ်ဘေးရော ကပ်ရောဂါကြောင့်ပါ ရခိုင်ဒေသခံများ နေထိုင်မှုခက်ခဲ…
မြန်မာပြည်တွင် Covid ရောဂါကြောင့် နေ့စဥ်သေဆုံးမှု စံချိန်သစ်တင်…
ပုရိသတွေ ကို ရင်ဖိုစေ ခဲ့ တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော် ရဲ့ အကြမ်းစား…
အမျိုးသမီး ထုကြီးကို CHALLENGE ခေါ်လိုက်တဲ့ TIKTOK ဆယ်လီ…
ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့ ဝင်သွားပီ ဝင်သွားပီ ဆိုတဲ့ Censored…
ဘရာ မပါတဲ့ ဇာအင်္ကျီပါးလေးနဲ့ ရွှေရင်အစုံ အထင်းသား…
အန္တရာယ်ရှိမှန်း သိပေမယ့် သားသမီးတွေရဲ့ ဆန္ဒကို…
အိန္ဒိယတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ…
Thadin Htoo isasocial news and entertainment website where you can findacollection of stories from all over the world. We deliver captivating stories, trending videos, and all kinds of topics that incite social conversations.
We strive to provide engaging and meaningful content worth reading and worth sharing. Our goal is to educate, entertain, and inspire you each and every day.
အန္တရာယ်ရှိမှန်း သိပေမယ့် သားသမီးတွေရဲ့ ဆန္ဒကို မပိတ်ပင်ဘဲ…
အိန္ဒိယတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ ခုနစ်သန်းကျော်…
© 2022 - သတင်းထူး - Thadin Htoo. All Rights Reserved.
Developed by TechAppStar